मानिसको बाहिरी शरीरमा कति समय बाँच्न सक्छ कोरोना भाइरस ? - Rajmarga
मानिसको बाहिरी शरीरमा कति समय बाँच्न सक्छ कोरोना भाइरस ?
नयाँ कोरोनाभाइरस मानिसको छालामा फ्लू भाइरसभन्दा पनि धेरै लामो समयसम्म बाँचिरहन सक्ने कुरा पत्ता लागेको छ । जापानमा गरिएको एक अध्ययनमा सो कुरा पत्ता लागेको हो ।
सार्स–कोभ–२ नाम गरिएको, अहिले महामारी फैलाइरहेको र कोभिड–१९ गराउने भाइरस मानिसको छालामा ९ घण्टासम्म बाँच्न सक्ने सो अध्ययनमा देखिएको थियो । त्यसको ठीक विपरीत मानिसलाई फ्लू गराउने इन्फ्लुएन्जा भाइरस चाहिँ मानिसको छालामा २ घण्टा जति मात्रै बाँच्न सक्छ ।
त्यसो त यसो भन्दैमा आत्तिइहाल्नुपर्ने कुरा चाहिँ छैन । किनभने यी दुवै भाइरसहरु स्यानिटाइटरको. प्रयोग गर्दा वा साबुन पानीले हात धुँदा निस्क्रिय हुने गर्छ ।
यो अध्ययनले कोरोनाभाइरसको संक्रमणलाई रोकथाम गर्न वा फैलिन नदिनको लागि साबुन पानीले हात धुन वा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्न किन जरुरी छ भन्ने कुराको महत्वलाई पुनःपुष्टि गरेको छ ।
त्यसरी प्राप्त छालाको मोडेल प्रयोग गरेर अनुसन्धानकर्ताहरुले सार्स–कोभ–२ भमानिसको छालामा ९.०४ घण्टासमम बाँच्न सकेको फेला पारे । जबकि इन्फ्लुएन्जा भाइरस १.८२ घण्टासम्म मात्रै बाँच्न सकेको देखियो । जब त्यो कोरोनाभाइरसलाई खोकी वा हाँच्छिउ गर्दाको अवस्थाको प्रतिरुपको रुपमा म्युकससँग मिसाइयो, त्यो बेलामा त्यो भाइरस झनै बढी समय, करिब ११ घण्टासम्म बाँचेको देखियो ।
रोचक कुरा के भने ८० प्रतिशत इथानोल भएको स्यानिटाइजर प्रयोग गर्दा ती दुवै भाइरसहरु १५ सेकेण्डमा नै निस्क्रिय भएको पनि अनुसन्धानकर्ताहरुले फेला पारे ।
यो अनुसन्धानको आधारमा उनीहरुले भनेको छन्, ‘सही ढंगले हातलाई स्वस्थ राखने हो भने । त्यसले सार्स–कोभ–२ लाई चाँडै निस्क्रिय तुल्याइदिन्छ र संक्रमित हुने जोखिमलाई पनि न्यून गराइदिन्छ ।’
उक्त अध्ययनमा संलग्न अनुसन्धानकर्ताहरुले सार्स–कोभ–२ ले दुषित भएको छालाले मानिसलाई संक्रमित तुल्याउन भाइरसको कति मात्रा आवश्यक हुन्छ भन्नेबारेमा थप अनुसन्धान हुनुपर्ने पनि जनाएका छन् । लाइभसाइन्स
Previous post:थाहा पाइराख्नुस आज बिहीबारको राशिफलमा तपाईको भाग्य कस्तो छ ?
Next post:आइपीएलमा चेन्नईको चौथो हार, कोलकाता १० रनले विजयी